G-6 tebụl na-arụ ọrụ ya na igwe anaghị agba nchara na isi G-6 Size: L1500 * W700 * H800mm isi ya: 1. epoxy coated steel steel with steel nchara na elu ya; 2. Ihe osise atọ nwere aka, bọọdụ abụọ nwere mkpọchi
Bed-kabinet kabia G-19
Ngwunye ngbunye ime ulo nke G-19 nke nwere ihe eji agba nchara rue ulo nke G-19 Size: L960 * W400 * H1750mm isi ihe: 1. epoxy coated steel steel with braless steel base; 2. ibo ụzọ abụọ na-emechi emechi, na-enwe oghere ise nwere ike idozi
Ime ụlọ ịkwa akwa G-9
Ngwunye ngbanye akwa igwe anaghị agba nchara, ụdị I G-9 Size: L960 * W400 * H1750mm isi ya: 1. igwe anaghị agba nchara; 2. Akụkụ dị elu nwere ibo abụọ iko a na-emechi emechi, ya na shelves atọ na-agbanwe agbanwe; 3. Akụkụ ala na otu nnukwu nchekwa mkpọchi
D-13 Phenolic bed kabọt D-13 Size: 480 * 470 * 780mm Ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ: 1. Ihe eji arụ ọrụ nke Phenolic 2. Otu bọọdụ nri, otu drọwa, otu obere ọnụ ụzọ 3. Onye nwere ihe nkedo anọ nke ọ bụla nwere breeki.
D-14 Phenolic bed office D-14 Size: 480 * 470 * 780mm Ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ: 1. Ihe eji arụ ọrụ nke Phenolic 2. Na otu bọọdụ nri, otu drawer, otu obere ọnụ ụzọ
ABS na akwa kabọt (ya na ndi nwere ego)
Ime akwa akwa nwere akwa nchara n’elu na isi ya